5 Sababood Oo Lamaantaada Ay kugu Nici Karto (Iska Ilaali) - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»5 Sababood Oo Lamaantaada Ay kugu Nici Karto (Iska Ilaali)
Aayaha Online, waxa ay idiin soo gudbineysaa 5 sabab oo lamaanata ay ku nacdo seygeeda, ee iska ilaali.
Daacadnimada waa u muhiim guurka sababtoo ah guurka waxa uu ku dhisanyahay daacadnimo, lamaantaada ma faraxsanaaneyso haddii ay kaa weyso daacadnimo, lamaan aanan faraxsaneyn waa guur aanan farxad heysan wuxuuna ugu dambeyn noqonayaa mid bur bura, waxaa u baahantahay in lamaantaada aad u kala cadeysid wax kasta maxaa yeelay waa wadada kaliya ee lagu dhisi karo kalsooni.
Caadiyan, way wanaagsantahay inaad shaqo ama ganacsi sameysatid intabadana waqti ma heshid, si kastana taasi kama turjumeyso inaadan waqti u heli Karin lamaantaada si aad waqti uwada qaadataan, dhib malahan sida uu uyaryahay waqtigaas, haddii lamaanataada aysan waqti kaa helin farxad ma jireyso.
Farxad ma heysato
Xiriirka waaa loo baahanyahay inuu noqdo mid farxad leh, waa inad farxad ku dareentaa la jooga ninkaaga, haddii ay taas Meesha ka maqantahay farxad la’aan ayaa meeshaas ka dhalaneysa, damaashaad ma u aadaan si wadajir ah ama dalxiis? Hadiyad ma u iibisaa dhib malahan yareenteed?.
Dadka ma jecal qofka niyad jabka badan, balse side iskugu daydaa inaad u xakameysid niyadaada iyo dareenkaaga si aad gacanta ugu heysid, sababtoo ah haddii aadan xakameyn waxaad bannaanka soo dhigeysaa dhibaatooyinka iyo ciladaha heysta guurka taaso gabi ahaan sababi doonta in lamaantaada wax intaas kabadan ay qaadan weyso isla markaana kaa tagto.
Waa masuuliyadaada in lamaantaada aad ka dhigtid mid wanaagsan, sidaa darteed waa dhaleeceyn kartaa waana sixi kartaa marka ay qaldantahay, si kastaba waxaa lagaa rabaa inaad u canaanatid si kalgacayl leh waana qaabkaas kan saxda ah, dhaleeceynta badan ee aad ku sameysid xaaskaaga waxay dareensiineysaa inaad jecleyn isla markaana aadan qiimeyn.